Uhlaziyo lwe-Gmail ... Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 12, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
Ngelixa ndonwabela uGoogle + kunye nokulula kokujongana nokusebenziseka okukhulu, i-Gmail ibonakala ngathi ihambile kwisigidi ngeyure kwelinye icala. Ndivule i-imeyile kwi-Gmail ngokuhlwanje kwaye ngekhe ndikwazi ukuyifunda i-imeyile:
Ukuba ujonga kakuhle i-Gmail namhlanje, inamakhulu (akukho kubaxeka) kwezinto zokuhamba kwiscreen. Kuyinto ehlekisayo kwaphela… yonke into ukusuka kwintengiso yemeko (ngasentla nasekunene), ekwabelaneni (phezulu ekunene), ukumema abasebenzisi abaninzi (ezantsi ngasekhohlo), kubo bonke abafowunelwa abagubungela umyalezo endizama ukuwufunda.
Le mayhem inyulu xa uyithelekisa nesiseko sikaGoogle:
Nanku ukujonga okuhle kuGoogle Plus:
Ngombulelo, kujongeka ngathi abantu base I-Gmail iwuqondile umba ujongano lomsebenzisi elitsha liza kungekudala:
Andijonganga nje ngeGmail… sisifundo kwinkampani nganye. Ndakhe ndagxeka inkampani edumileyo kwingingqi kuba babenezinto zokuhambisa ngaphezulu kwama-200 kwiphepha labo lasekhaya. Yenze ukuba isiza singasetyenziswa. Ngelixa ndiqondayo ukuba inkampani iyazingca ngeemveliso zayo, amanqaku, abathengi kunye nolunye ulwazi… akukho mfuneko yokuba ubhale yonke into kwiphepha elinye lesiza sakho okanye usetyenziso.
Nika ulwazi olwaneleyo lokuba undwendwe lufumane into ebebeyifuna.
Nika ukhetho kubasebenzisi abanqwenela ukwenza okungakumbi. Oku kubizwa ngokuba 'kukuchazwa okuqhubekayo'. Ngamanye amagama, bonelela kuphela ngezinto ezigqibeleleyo kubatyeleli ukuze bakwazi ukufezekisa into abayifunayo. Kwaye ukuba bafuna ukumba nzulu, bonelela ngendlela yokwenza ukuba ukhetho lubekhona.
Ayizizo zonke izinto ekufuneka zipapashiwe kwindawo yakho. Vumela izixhobo, iiplagi, iifom, kunye nezinye izongezo zabantu zokwenza izicelo ezongezelelweyo.
Yenza ubuncinci umntu omnye onoxanduva kwiqela lakho ukuba alwe kwaye aphikisane nayo yonke into eyongezelelweyo abantu bakho bangaphakathi abafuna ukongezwa kwiphepha lasekhaya. Kufanele ukuba yimfazwe! Xhomekeka kwi kubahlalutyi ukungqina umba-kuncinci kuya kuhlala kukhokelela ekusetyenzisweni okukhulu nasekuguqulweni.
Ngokoluvo lwam, ujongano olutsha lweGmail lunokwenziwa lula nangakumbi… mhlawumbi ngekhonkco elihambele phambili ngaphakathi kunqanawa kunalo naliphi na iqhosha lesenzo ngasinye. Ngcono nangakumbi, vumela abantu ukuba bazimele kwaye babonise izinto abazikhathaleleyo. Ndijonge phambili kuhlaziyo, nangona kunjalo, ukuze ndikwazi ukufunda i-imeyile yam.
Jul 13, 2011 ngo-2: 46 AM
Doug, andinakulinda ujongano olutsha! Uchanekile ngokupheleleyo kwiingxelo zakho zokuba kufuneka uqale ngemveliso esisiseko kwaye wenze "uphuculo" kunye "neempawu eziphambili" zifumaneke lula kubasebenzisi abazifunayo. Isithuba esicingayo. Ngaba ndikhankanye ukuba andinakulinda ujongano olutsha lweGmail? 🙂
NgoJulayi 19, 2011 ngo-12:47 PM
Sele ndinojongano olutsha. Iphantsi kwe Useto, Useto lwemeyile, imixholo, iPreview theme. NdikwiApps ezihlawulweyo ke andiqinisekanga ukuba inketho yayo phantsi kokungahlawulwanga okanye hayi. Indlela yayo engcono. Kwakhona kufuneka uphume http://www.rapportive.com